တစ်ရက် PIPS ၃၀ ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာ
ဒီနေ့ ပြောပြချင်တာကတော့ ထရိတ်တဲ့အကြိမ်ရေ ၄၀တည်းနဲ့ ဒေါ်လာ ၁ သန်းအထိရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ Fred ဖရက်အကြောင်းပါ. အရမ်းလန်းပါတယ်. ဒီမှာကတော့ သူပြောပြတာပါ. သူက တစ်ရက် pips ၃၀နည်းဗျူဟာလို့ ခေါ်ပါတယ်. GBP/JPYက တစ်ရက်ကို (pips ၁၀၀ကနေ -၂၀၀ အထိ) ဈေးလှုပ်ရှုားတတ်တဲ့ ငွေကြေးအတွဲဆိုတာကို သိမှာပါနော်. ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်က ထရိတ်ဒင်းလုပ်ရင်း ငွေဈေး margin မာဂျင်တွေအားလုံးကို ဖမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး. 30 pip လောက်ပါပဲ. ကဲနောက်ကြောင်းလေးပြောပြီးပြီဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားရအောင်. နည်းဗျူဟာအကြောင်း ဖော်ပြချက်တွေကိုကြည့်ပါမယ်.
၁။ GBP/JPY ငွေကြေးအတွဲကိုရွေးပါ
၂။ ၅ မိနစ် screen ကိုပြောင်းပါ
၃။ ဇယားမှာ အင်ဒင်ကေတာအချို့ကိုထည့်ပါ။ ၁၀ နှင့် ၂၆ exponential moving averages (EMA) ကိုရွေးချယ်ပါ
အကယ်၍ 10 EMA က 26 EMA နဲ့ဆုံပြီး အထက်တက်သွားရင် အတက်ထရမ်းလမ်းကြောင်းကို တွေ့နေရပါပြီ။ အကယ်၍ စောနကအတိုင်းဆုံပြီး အောက်ကျသွားရင် အကျထရမ်းလမ်းကြောင်းပါ. EMA တွေဖြတ်တာကိုတွေ့ပြီးနောက် ထရိတ်ဒါရဲ့ action လုပ်ဆောင်ချက် ဇုန်ကိုသတ်မှတ်ရပါမယ် (ဈေးကွက်ထရမ်းလိုင်းအပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းပြန်တက်ကျမှုပြဇုန်၊ အ၀ယ်ဇုန် ဒါမှမဟုတ် အရောင်းဇုန်တွေကိုပြောတာပါ)။ အတက်ထရမ်းလိုင်းမှာ အသေးစား အကျအတွက်ကြိုးစားမှုတွေရဲ့အဆုံးမှာ ထိုဇုန်ဟာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ထရမ်းလိုင်းက ကျမယ်လို့မြင်ကြည့်ပါ။ အသေးစား အတက်အတွက်ကြိုးစားမှုတွေ ထိုအကျဈေးကွက်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဈေးက အဓိကထရမ်းလိုင်းမှာ ကျတဲ့အခါ ထိုဈေးရဲ့ ပြန်တက်ရန်ကြိုးစားမှု (ဈေးက ရေတိုခဏတက်ခြင်း) က ထရိတ်ဒါရဲ့ action ဇုန်ထဲမှာ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်က အတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ထိုနည်းသဘောနဲ့ (ဆန့်ကျင်ဖက်)ဖြစ်ပေါ်ပါမယ်။
အကျလမ်းကြောင်း downtrend အခြေအနေတွင် သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ
10 EMA က 26 EMA ကိုဖြတ်ပြီး ကျသွားတာကို သင်သတိထားမိမှာပါ။
ထိုဖြတ်ကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုအပြီးမှာ သင်တန်းပြီးမရောင်းသင့်ပါဘူး။ အတက် (သို့)အကျ ပြန်ဖြစ်လာတာကို စောင့်သင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဖယောင်းတိုင်က 10 EMA နဲ့ 26 EMA ကြားတစ်ဝက်မှာ ထရိတ်ဒါရဲ့action ဇုန်ကိုဝင်တဲ့အခါ သင်ရောင်းပါ။
Stop-loss ကို ၁၅ နဲ့ ၂၀ pip အတွင်းမှာထားပါ။
သင့်ရဲ့ Take-profit က 30 pip ပါ
အတက်လမ်းကြောင်း အခြေအနေတွင် သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ
10 EMA က 26 EMA ကိုဖြတ်ပြီး တက်သွားတာကို သင်သတိထားမိမှာပါ။
ထိုဖြတ်ကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုအပြီးမှာ သင်တန်းပြီးမ၀ယ်သင့်ပါဘူး။ အတက် (သို့)အကျ ပြန်ဖြစ်လာတာကို စောင့်သင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဖယောင်းတိုင်က 10 EMA နဲ့ 26 EMA ကြားတစ်ဝက်မှာ ထရိတ်ဒါရဲ့action ဇုန်ကိုဝင်တဲ့အခါ သင်ဝယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Take-profit က 30 ကနေ ၄၀ pip အတွင်းပါ
12.07.2018 11:10 ရောင်းဝယ်သူ၏ လျှို့ဝှက် လက်နက်: ဆိုင်းငံ့ အော်ဒါများ
ဆိုင်းငံ့ အော်ဒါများကိုအသုံးပြုပြီး အမြတ်ရနိုင်မည့် သင့်အခွင့်အရေးကို မြင့်တင်လိုက်ပါ။
28.06.2018 15:41 supportနှင့် resistance အဆင့်များ ရှာရန် နည်းလမ်း ၅မျိုး
ဘယ်ရောင်းဝယ်သူမှ resistanceနှင့် support အဆင့်များမရှိဘဲ အရောင်းအဝယ်ဆိုတာကို စိတ်ကူးလို့တောင်မရပါဘူး။
BITCOIN, ethereum, သဘော, အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း, LITECOIN, dash, ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ, နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက်, ထုတ်လုပ်သည်, လူသုံးကုန်, စီးပွားရေး, လူတွေ့မေးမြန်း, ဘလော့ချိန်း, လူနေမှုဘဝ, GOLD, chf, AUD, bitcoin, FOREX EXCHANGE, forex ပညာပေးသင်ကြားရေး, ဥရောပ, ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး, သြစတြေးလျ, eur, ကုနျသှယျရေး BITCOIN, အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား, NZD, jpy, အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း, တရုတ်, ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်, အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ, စက်မှုလုပ်ငန်း, လက်လီရောင်းချသူများ, ငွေကြေးဖောင်းပွမှု, forex factory, CAD, အပျော်, ပညာရေး, ဖြစ်ထွန်းမှု, DOW JONES, usd, အာရှ, forex signals, TRY, လှုံ့ဆော်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး, forex ကုနျသှယျ, GBP, အတိုးနှုန်း, အမြတ်, ဂျာမနီ, ထိုင်ဝမ်, စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်, ဈေးနှုန်းများ